VaMugabe naVaTsvangirai Vopesana paZvisungo zveSADC
Nyamavhuvhu 22, 2011
Paita zvakare kusataura nezwi rimwe chete pakati pemutungamiri wenyika, uye vari mutungamiri weZanu PF, VaRobert Mugabe, pamwe nemutungamiri wehurumende, uye vari mutungamiri weMDC huru, VaMorgan Tsvangirai, panyaya yezvakabuda kumusangano weSADC Summit kuLuanda, Angola svondo rapera.
VaMugabe vakaudza bepanhau reThe Herald kuti nyaya yekuti nyika nhatu dzeSAC Troika dzidome vanhu vachapinda munyika vachishanda neJOMIC pamwe nenhumwa dzemutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, yakaraswa nemusangano uyu, sezvo JOMIC iri boka renyika yakazvimirira.
Asi VaTsvangirai vakaudza vatsigiri vebato ravo neSvondo kunhandare yeSakubva kwaMutare kuti chikwata ichi chiri kutarisirwa kupinda munyika chero nguva kuti chishande neJOMIC mukuona kuti chibvumirano cheGlobal Political Agreement chazadziswa.
Gwaro rakaburitswa neSADC mushure memusangano wekuAngola uyu rinoti musangano uyu wakatora zvisungo zvemisangano yakaitwa kuLivingstone, Zambia, uye kuSandton, Johannesburg kuSouth Africa.
Gwaro iri rinotaurawo pachena kuti musangano uyu wakakurudzira SADC kuti idome vanhu vatatu vachashanda neJOMIC pamwe nenhumwa dzaVaZuma, avo vanova mutongi gava pagakava remuZimbabwe.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, VaCharles Mutasa, vaudza Studio7 kuti vatungamiri vaviri ava havasi kuimba rwiyo rwumwe chete nekuti mumwe nemumwe anotarisa divi rakanakira bato rake pane zvinenge zvabuda mumisangano yakadai.
VaMutasa vatiwo chichatarisirwa zvikuru nevana veZimbabwe ndechekuda kuona kuti zvii zvitsva zvichaburitswa nechikwata ichi pamwe neJomic, zvakatadzwa neJOMIC iri yoga.